Mila mivarotra ny Apple Watch ve ianao? Vonoina ny hidim-pahavitrihana alohan'ny | Avy amin'ny mac aho
Ary izany dia ankoatry ny fananana fitaovana azo antoka, ny tadiavintsika rehefa mivarotra vokatra Apple isika dia ny manaraka hampiasana azy io dia afaka manao izany tsy misy olana, izany no maha-zava-dehibe ny fanafoanana ny atin'ny famantaranandro toy ny ny asa tokony hataontsika alefaso ny hidy fampahavitrihana.
Amin'io lafiny io, raha mila mandefa ny famantaranandro any amin'ny serivisy teknikan'i Apple isika, manome azy na mivarotra azy aza, tena zava-dehibe ny fanatanterahana an'io dingana io mba hahafahan'ilay olona mandray azy hiara-miasa aminy tsy misy olana. Marina ny rafitra iCloud amin'izao fotoana izao dia tena azo antoka amin'ity lafiny ity ary raha tsy manaraka ireo dingana ireo isika dia tsy ho afaka hampiasa azy ilay olona mandray famantaranandro.
Lock Activation alohan'ny handefasana Apple Watch
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fampisehoana backup amin'ny famantaranandro raha sendra manana na te hampiasa azy io amin'ny fitaovana ho avy isika, ho fanampin'ny tahiry, ny zava-bita ary ny sisa amin'ny medaly dia voatahiry ao amin'ny iCloud. Ka ny fanatanterahana ny nomaniny ho solon'izay dia tsotra toy ny tsy fampirafesana ny Apple Watch avy amin'ny iPhone, ary ity dia hiteraka backup amin'ny iCloud na iTunes.
Vantany vao vita ny kopia, mba hofoanana ny famantaranandro dia mila manaraka ireto dingana ireto isika:
Miaraka amin'ny Apple Watch sy iPhone miaraka dia manokatra ny app Apple Watch an'ny iPhone izahay ary tsindrio ny famantaranandroko.
Tsindrio ny anaran'ny famantaranandro eo an-tampon'ny efijery, avy eo paompy
Misafidy ny hanafoanana ny Apple Watch izahay. Ao amin'ny Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) misy dingana bebe kokoa, mila manery ny Delete ny plan [mpandraharaha] isika. Raha tsy mampiaraka Apple Watch hafa amin'ny iPhone izahay dia mety mila mifandray amin'ny mpitatitra ianao hanafoanana ny famandrihana data
Manoratra ny tenimiafin'ny Apple ID izahay ary manamafy
Ireo dingana ireo dia azo atao lavitra, fa tsara kokoa ny manao azy alohan'ny hanateranao ny Apple Watch. Amin'ny tranga fa efa tara dia afaka miditra amin'ny alàlan'ny iCloud.com isika Tsy maintsy manaraka ireo dingana ireo avy amin'ny tranonkala ianao hamono ny hidin-trano fampahavitrihana:
Niditra izahay iCloud.com ary miditra amin'ny Apple ID izahay
Andao jerena ny iPhone-ko ary safidio ny fitaovana rehetra> Apple Watch
Tsindrio ny Delete Apple Watch. Misafidy ny Next izahay mandra-pamafana tanteraka ilay fitaovana
Esorinay ny Watch APple avy amin'ny iCloud amin'ny alàlan'ny fanindriana ny
eo akaikin'ny Apple Watch anao sy voila
Aza adino fa ireo lakilen'ny iCloud ireo dia tsy tokony omena olona hanala ny famantaranandro amin'ny kaontintsika na ny mitovy aminy, manana fahefana feno izahay hanesorana izay Mac, iPhone, Apple Watch, iPad, sns, avy any an-tranontsika na amin'ny solosaina rehetra, ka tsia mila mahafantatra ny tenimiafintsika iCloud mihitsy ny olona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Mila mivarotra ny Apple Watch ve ianao? Esory aloha ny hidim-pahavitrihana aloha
Mila mitandrina amin'ny fivarotana azy ianao nefa tsy manafoana izay rehetra ao anatiny.